Kedu ụzọ kachasị ọsọ iji gbagoo ugwu dị larịị? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ugwu di elu - otu esi edozi
Kedu ụzọ kachasị ọsọ iji gbagoo ugwu dị larịị?
Atụmatụ isii dị n'okpuru bụ isi ihe na-agaỌsọ ọsọugwu.
Chee Echiche! Ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya na-ekpebi na ha bụ ndị ogbenye dara ada ma na-eche na e meriri ha n'ihurịgoroọbụna na-amalite.
Malite na Conservative, mana Adịghị nwayọ.
Si na sadulu wepu.
Ise n'elu na flatter ngalaba, inupụ nankpodaakụkụ.
Na-ebu Oge Gị n’elu.
Ogologo ugwu di oke obi ojoo, ka anyi kwuo eziokwu. Echere m na onye ọ bụla nwere ike ime ogologo ugwu. Just ga-agarịrị nwayọ nwayọ, ọbụghị? Ọfọn, ọ bụ ezie na ịrị elu dị elu bụ na mgbe ahụ ị ga-ata ahụhụ n'ezie, mana enwere ụfọdụ aghụghọ nke azụmaahịa ka ọ bụghị naanị nyere anyị aka ịnya ha, mana ị ga-agbago ha ngwa ngwa.
Ọfọn ọ dị ọchị na ị ga-agwa Matt. Ride na-agbago ugwu di elu ma o si na oche? Ọfọn, na nkenke, ọ dabere na gị. Ma ọ bụrụ na ị masịrị nke ọzọ, nke ahụ nwere ike bụrụ nke kacha mma.
Uru nke ịnya n'ime ihe a bụ na ọ bụrụ na ihe gị na-ekwe, ị nwere ike ịgbanye ngwa ngwa, nke pụtara na ị nwere ike ma ọ bụ na ị gaghị akwụsị imebi ahụ ike. Ọ dabere na oge ole na ole ị ga-arịgo, ma ọ bụrụ na ọ dị nkenke n'ezie ọ ga-enyere gị aka ijigide traction na wiil azụ site na-ebuwanye ibu karịa ya. Anụtụbeghị m banyere onye na-agba ịnyịnya ọkachamara na-anọdụ ala, na-akụ, ma ọ bụ na-esoro ndị na-agba ịnyịnya na-agba ịnyịnya n'elu ugwu dị elu, ma e wezụga n'ezie n'okporo ámá cobblestone ebe ị ga-enweta ọtụtụ traction mgbe ị nwetara n'elu azụ ụkwụ setịpụrụ mma ọkwa na ị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ na nkpoda dị elu mgbe ị na-apụ n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ọ bụ ezie na ị na-akwụ ụgwọ ya obere oge ka e mesịrị n'ihi na ị na-eji ike dị ukwuu karị Gia ị na-ahọrọ ịnya elu ugwu dị elu, ya mere gị cadence Ihe mbu bu na ikwesiri igbanwe gia tupu i nwe.
Na karia ihe niile site na nnukwu ihe ntinye aka na obere ihe ntinye. N'ihi na ọbụlagodi gia kachasị ọnụ anaghị achọ ịgbanwe nrụgide. Ya mere gbanyụọ tupu ịrapara.
Nke abuo, ọ bụrụ na mgbatị gị kwere, ị ga-enwe obi ụtọ ịnwe mgbatị dị mfe karị, ọkachasị na njem ndị toro ogologo, iji wee nwee ogo dị elu ma dịkwa mma. Kedu ihe ị pụtara site na ikwe ka gia? Nnoo na Kwadobe obere ezu na ị ga-atụle ma eleghị anya, a 34 ezé yinye n'ihu na mgbe ahụ ma eleghị anya ọbụna a 32 nha nha cassette na azụ. Akụkụ ndị a kwesịrị ịdị mfe iji kpoo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ korota ọ bụla.
Ọfọn, ị ga-enyekwa ya ụfọdụ akpụkpọ ụkwụ roba. Ogologo mkpụmkpụ, ịrị elu ịrị elu nke ugwu nwere ike ịdị ka echiche ndị ọbịa. Ọ bụrụ na ị na-arịgo ịrịgo elu, ị ga-enyerịrị ihe niile i nwere ogologo oge ị nwere.
Mana ọtụtụ ugwu dị elu na-ebute akụkụ ndị na-erughị eru ma ọ bụ nwere ike ịbụ nnukwu nkpoda ogologo oge. Yabụ na nke ọ bụla, ị ga-eji isi gị na ụkwụ gị. Eeh.
esi na-akụziri a nwa ịnyịnya ígwè
Ọ bụrụ n ’ị maara nrịgo ga-arị elu n’akụkụ na-emighị emi, gbalịa jiri nwayọ nwayọ wee nwee ike gwuo ala nke ọma ma jisi ike ka ụzọ na-arị ugwu ma na-asọda, ọ nwere ike iwe ihe dị ka sekọnd iri atọ na mbido. ewepụghị akụkụ nke ida na ịrị ma n'ezie nweta ihe dị ka a nkeji na nkpoda ngalaba otú ị ga-eji isi gị na-aga na ala, nke ahụ bụ mara mma doro anya, ihe banyere isi gị na-agbalị ike? Ọfọn, ọ bụ ntakịrị echiche jọgburu onwe ya, mana inwe echiche uche dị mma ga - enyere gị aka ịnya ịnyịnya ígwè gị, nke ahụ apụtaghịzi na ịrịgo dị elu dị ka nke a. Ee, inwe mmetụta dị mma ga - enyere gị aka igwu ala. Ga-enwetakwu onwe gị wee, na-eju anya, ọ ga-emerụ ahụ obere.
Amaara m na ọ dị obere, mana na ahụmịhe m, m na-agbakarị ngwa ngwa mgbe m chọpụtara mbọ m na-agba ịdị mma karịa mgbe m chọpụtara mbọ ọfụma. Ana m anya nwayọ nwayọ, nwayọ nwayọ nwayọ, ị ga-eme ka mgbakọ na mwepụ gị jidere gị. Ọ bụ n'ezie mfe physics.
Yabụ ọ bụrụ na ịnwere ọkụ, igwe kwụ otu ebe na ị bụ onye na-agba ọkụ, ị ga-achọ obere ike iji gbagoo ugwu ahụ. Mana enwere oke oke na otu ị ga - esi gawa. Yabụ ọ bụrụ na ị na-azụ ọzụzụ na ịrị elu dị elu ma na-achọ maka ihe omume jupụtara na ịrịgo, ọ bara uru iche echiche banyere ịwụfu otu paụnd ma ọ bụ abụọ.
Ga-enweta nnukwu elele na nke a. Ọfọn, ọ bụrụ na ị bụ onye ọkwọ ụgbọ ala ka ukwuu, adala mbà. Nke mbu, lee anya na njem nke Flanders, agburu nke ejiri otutu ugwu di elu mara.
Ọ na-abụkarị ndị ọgba ịnyịnya sitere na ụdịdị dị iche iche nke ndị ọkachamara ịgba ịnyịnya ígwè. Mgbe emesiri gosiputa ike gi, inwere ike inweta, chee echiche banyere iji ihe okike gi mekwaara gi uru, ya mere bido na nrigo na n’elu nzuko, bido ime osiso ma nwaa ngalaba di nfe na ndagwurugwu n'ihi na ndi riri ugwu gha agba oso. n'aka gi na nkpoda. Ọ na-arụ ọrụ n'ịgba ọsọ ọkachamara ma ọ nwere ike ịrụ ọrụ maka gị.
Chee echiche azụ afọ ole na ole gara aga mgbe Thor Hushovd ji nke ahụ merie ugwu nke Tour de France. So nkpo ugwu? Buru ijeụkwụ ahụ, họrọ gia gị ma werezie isi gị na-agagharị. Echefula na ị ga-akụrịrị ya.
Nke a bụ eziokwu. Ihe ọ bụla. Iji zụọ maka ịrị elu, pịa ebe a.
Maka isi ụlọ akwụkwọ na nka nke na-arị elu site na onye ọ bụla ọzọ karịa Alberto Contador, pịa ebe a n'okpuru. Eeh, dị njikere ịbanye na GCN tupu ị gaa na nke ọ bụla. Ọ bụ kpam kpam free.
Na tiori, ị ga-pịa ụwa uhie.
Kedu ihe bụ ịrị ugwu?
Ọ bụ ihe ọ bụlarịgorona akuku karịrị 90 ogo vetikal na ọ na-ewe otu nkà akọwapụtara iji nwee ike ịnyagharịa ụzọ gịsteepụteren. Omumaịrị ugwuebe dị ka Red River akpiri, Rifle na Maple Canyon na-ọma mara nke a ịke nkeịrị ugwu.Eprel 24 2017
Ọ bụ na Harlech amachaghị na Wales, James? - Ee, enyi. Oh ọ dị mma - you maara na Castle Castle malitere mbido ya na 1283 ma bụrụ ebe e wusiri ike nke Owain Glyndwr, nwoke Welsh ikpeazụ na-azọrọ aha Onyeisi? nke Wales? Abụ a ụmụ nwoke nke Harlech, nke ọma, nke ahụ bụ maka nnọchibido afọ asaa nke ụlọ elu ahụ na 1481? - M pụtara di ma ọ bụ nwunye, nke a bụ ihe na-atọ ụtọ ma dịkwa mma, mana kedu ihe mere ị ji kpọta m na North Wales na February iji nye ya? m ihe mmuta? Iji mee ihe ziri ezi, agara m enwe ike ịkọwa ya. - Chere, chere, chere.
N'ihi na Harlech na-ekwukwa na ya nwere okporo ámá dị larịị n'ụwa. Ma ọ nọ n’ebe ahụ. Ọfọn, ọ dịghị mkpa na ha ga-azọrọ ọzọ.
Ọ bụ ọrụ gọọmentị. Ka ọ dị na Julaị 16, 2019, Guinness World Records egosila na Ffordd Pen Llech na Harlechi bụ n'ezie okporo ụzọ kachasị elu n'ụwa. Edere aha ahụ na Baldwin Street na Dunedin, New Zealand na mkpọda 35%.
Ma mgbe m tufuru aha ahụ na World Cup of Cricket, ọ bụghị ezigbo izu maka Kiwis - Ollie mere ka m bịarute North Wales n'etiti etiti oge oyi iji hụ ma ọ bụrụ na anyị ga-azọ ụkwụ kachasị ọsọ nke ụzọ kachasị elu n'ụwa. GCN nwere ike. Ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume, mana Ollie nwere ntụkwasị obi dị ịtụnanya. Buddy, nke a di elu. (James chịrị ọchị) Wales na New Zealand dịcha mma, nwunye, ha abụọ nwere oke mmiri ozuzo, ha abụọ nwere ugwu - ha abụọ hụrụ atụrụ n'anya - ee, mana New Zealand nwere kiwis, Wales nwere egbe. - Nwere kites.- Dị ka Strava si kwuo, ọrịrị ahụ dị mita 330 n'ogologo ya na grajentị 16%, nke bụ 36 ebe a.
Ya mere, anyị chere na anyị ga-atụ ya n'onwe anyị iji hụ ma ọ bụ n'ezie, James, ịchetara teknụzụ dị elu GCN? Nchoputa? - Ee enyi - Kedu ihe ọ bụ? - Gini, ekwentị m. Kedu? Ha na-eme ihe niile n’ụbọchị ndị a. Lee anya na, 36% echeghị m na ị nwere ike ịnya ịnyịnya a - m nọ na-ele Strava, ọ bụ naanị ihe dị ka mmadụ 600 nọ ebe a, echere m na anyị nwere ezigbo ohere ịnweta KOM na steepụ dị elu nke !wa! Kedu ka nke ahụ si dị mma? - Iji mara mma, nke a ga-adị mma. - Ee. - Ma obu uzo n’otu uzo, obughi ya? - Echegbula onwe m, echere m nke ahụ.
N’elu ụlọ anyị nwere otu nwoke nwere akara. Agwara m obodo, ha gbochiri ụzọ karịsịa maka anyị. - Na, enyi, ọ bụ ridiculously nkpoda, M ike na-bilie ebe. - Echere m na nke ahụ.
Echere m otu ụbọchị na 22 mph tailwind. Ọ ga-abụ ihe ịtụnanya! - Mana ị cheghị maka ya, enyi, enweghị m igwe kwụ otu ebe ka m nweghị ike ịme ya. - Ee, m juru n'ọnụ ya n'ihi na ị. - Ndi ị? - Ee - Oh enyi.
Ọ dị mma, echere m na m dị njikere - you dịla njikere, ịchọrọ ịnwale? - Tinye m taya ala - Nice extra traction, Ọ masịrị m. - Ọ dị mma, lee ihe anyị nwere ike ime. - Lee ma ị ga-emeli ya. (Oge nhazi oge) - Na sadulu! - Ihe James amaghị bụ na agbanwere m ngwa ya maka 39: 23 (ọ chịrị ọchị)! - Ọ na-aga nke ọma. (egwu sitere n'aka orchestral) - Na-efe elu n'ebe ahụ, olee otú ọ dị? - huh? - Olee otú ọ dị? - O siri ike. - Ee? Ọ siri ike - Ee.
Lelee Strava. - You're bụ nke abụọ na Strava. Nọ na Strava.
Egwuregwu ziri ezi, nke ahụ! - Ebee ka ị hụrụ nke a? - N'ihi na ị nwetara 1: 26.1 nwetara: 26 bụ nke abụọ, ị bụghị ụbọchị, mana ị ga-adị.- Oh, 2 ..- Fairer 1.2. na steepụ nke kachasị elu n'ụwa, nke ahụ dị mma, na.
M gbanwere gia, agbanyeghị, echefuru m ịgwa gị. - Oh, ị mere? - Eeh. Tụgharịa na 39: 23 gị - Oh! - Naanị chere na ọ nwere ike ime ka ọ dịrị gị mfe - m hapụrụ taya ahụ, ọ dị m ka ịgba ịnyịnya ígwè. (Ollie chịrị ọchị) Echere m n'ime onwe m.
Odi mma, echere m na obu oge nke gi. - Oh chineke, aga m enye ya a laa. - Ma ị nwere igwe kwụ otu ebe gị. (Ollie scoffs) Mfe, okpu agha na-arị elu, ọdụ ikuku.
Buddy, nke ahụ bụ ihe niile, nke a bụ nke gị. Enwere m ike ịnụ ya (egwu egwu egwu) Obi dị m ụtọ na ya 1: 26 chere obere oge, Ollie, ị nọ na e-igwe? Nke ahụ ọ bụ Ollie na igwe ele e-igwe? (egwu sitere n'ike mmụọ nsọ) (James chịrị ọchị) Ngwanụ, Ollie! Ah, o na efe n’elu ebe ahu enyi. - enyi. - Nice skid, fair play, i wetara ihe e-igwe kwụ otu ebe na ị. - Amaara m - I wetara e-igwe kwụ otu ebe gị. - Ị ma nke mere? Emere m ya.
Emere m ya ma mee ya, ọ bụghị ya? - now bụ ugbu a onye kachasị ọsọ n’ụwa n’ụwa ịrịgo ihe siri ike n’elu ụwa. Amaara m na ọ dị mma, m na-ekwu - Kedu ka nke ahụ si adị? - Ọ dị oke mma, m na-ekwu, ihe ndekọ a ga-adịru mgbe ebighi ebi. Enweghị m ike ịhụ onye ọbụla ga-eti ihe a, a na m ekwu onye ga-enwe mwute nke ga-eche ụbọchị oke ọdụ, nweta ndụmọdụ iji gbochie ụzọ ma weta igwe ele e-igwe? - Ọ dịghị onye ọ bụla, Buddy - Ọ dị mma ụmụ okorobịa? - Onye bụ onye ahụ? Buddy, nke a bụ Dan Evans, mba, nke ọma, ọtụtụ onye mmeri mba ugwu.
Gịnị ka ọ bụ? ọ na-eme ebe a? (epic orchestral music) - Buddy, ọ nwere ike ọ gaghị enweta ya. Ee ọ bụ onye mmeri mba mba na ee ọ nwere ike ịnọdụ ala na 800 watts maka nkeji, mana onye ọlụlụ, ọ dị mmiri mmiri, ọ dị mmiri mmiri ma na-adị gị ngwa ngwa karịa. Got nwetara ya. - Ee, echere m na ị ziri ezi.
Oh, m nwetara email. Otu onye were KOM gị. - Mba - adikwa, enyi? - Kedu ka ị mere? - Ee adị m mma.
Kedu ka ị mere? - Ezigbo onye na - egwu egwu - Ee, ọ dị mma. - Tụkwasị onwe gị obi ka ị gosipụta! - Ọfọn, otu n'ime ugwu m dị na mpaghara! - Gini ka o gha adi n'uwa na nke ozo? - 600 watts maka nkeji na 11. Nnukwu mgbalị. - I mere ka ọ dị mfe. - Ah, ọ siri ike, ịrịgo siri ike. - Ya mere, ị rịgoro ọtụtụ ugwu.
Olee otú o si anya? - Ọfọn, ọ bụ n'ezie usoro nkpoda dị elu, dị ka nkpoda dị ka ọ na-ada. Ọ dị nkenke, mana ọ jọgburu onwe ya. - Eeh, ọ dị mma, ọ dị mma ịlele ma kelee gị na ịrị elu steepụ nke KOM n'ụwa.
Daalụ Dan Evans, onye bụbu ọkaibe n’ugwu mba. Ọ dị mma, anyị nwere olile anya na ị nwere mmasị na edemede a na mbọ anyị na-adịghị ike ịnata COM - Anyị gbalịrị, ọ bụghị ya? - Ọ bụrụ otu a, biko nye ya mkpịsị aka ukwu ma denye aha na ọwa ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ile otu edemede banyere otu esi esi arịgoro elu, wee pịa n'okpuru.
Ọ ka mma ịgba ọsọ ma ọ bụ ịga ije n'ugwu?
Na-eje ijenwere ike belata oge gị, manana-agba ọsọnwere ike ijisi ike gị, na-eme gịỌzọenwere ike iti mgbidi ahụ ngwa ngwa. Dị ka ọtụtụ ọmụmụ, gị obibia kwesịrị ịdabere na abụọ nnukwu ihe: gị aerobic mma larịị na steepness nkeugwu. Nke ahụ bụ uru karịrịna-eje ije. 'Jenụwarị 14. 2021 g.
♪ Bob na Brad, ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa abụọ a ma ama ♪♪ na Internetntanetị. ♪ - Ndewo ndi be anyi, abum Bob Schrupp Physiotherapist - Brad Heineck Physiotherapist - Anyi bu ndi physiotherapists a ma ama na Ntaneti - N’echiche anyi, n’ezie, Bob - Okay, aha ihe omume nke taa bu ‘Physiotherapist n’egosiputa otu esi eje ije nke oma. 'Anyị ji anyị kpọrọ ihe? (Bob chuckles) Echere m, anyị ga-egosi ndị mmadụ na ije ahụ? Ee anyị bụ Ọ bụrụ n’ịchọrọ obere olu, azụ, ikpere, ikpere, na ụfụ ụkwụ mgbe ị na-aga ije, ịghara ịkọwa eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ ndị nwere ike isi ọwụwa mgbe ha na-eje ije n’ihi adịghị mma.
Soro ntuziaka ndị a, anyị ga-ekwukwa banyere ya, ịga ije dị egwu mgbe emechara (Bob chuckles) anyị ga-egosi gị otu esi eme ya nke ọma.- Okay Bob.- BTW, if you are new to our channel, take Biko were nkeji nke abụọ ka ịdenye aha iji nye akụkọ gbasara otu ị ga - esi gbasie ike, nọrọ n’enweghị ihe mgbu ma anyị bulite ha kwa ụbọchị.
Wow.- Lee anya na.- Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na ọwa anyị, gaa na bobandbrad.com n'ihi na anyị na-enwekarị ọfụma ma n'izu a, anyị na-enye akwa ụra mgbapụ ụra.- Kpọmkwem, Bob.- Nke a bụ naanị otu Nlereanya nke matrasị ahụ, matraasi ahụ ka ukwuu.
I nwekwara ike ịga Facebook. A ga-atụgide asọmpi ahụ n'elu peeji ahụ, gaa na Twitter ma ọ bụ Instagram ma ọ bụ TikTok. N'ezie ngwa ngwa na matraasi, ọ bụ 700 mattresses nwere ikuku nwere ọwa iji nyere aka mee ka ọ dị jụụ. - Nke ahụ dị mma. - Ya mere n’onwe anyị, anyị abụọ nwere akwa akwa a ma anyị abụọ hụrụ ya n’anya. - Iche iche iche. - M kwuru na n’onwe anyị abụọ nwere matarasị. - Igosi.
Ọ ga-akara anyị mma ịbanye na isiokwu ahụ, ọ dị mma. - Ọ dị mma, yabụ ka anyị kwuo maka ya, ihe izizi ịchọrọ (chuckles) ihe mbụ ịchọrọ ịme mgbe ị na-apụ bụ ibelata mmetụta otu eziokwu ahụ enwere ike idobe na ịgba ọsọ. - N’ezie, e nweela ọtụtụ mkparịta ụka na ọtụtụ akwụkwọ gbasara ya.
Na ichoro igba oso n’enweghi mmetuta ma amaghi m ma omumu omumu banyere onye na agbasa ozi a, mana na oge obula m huru otutu ndi n’agwa m banyere ya, ha nwere oke ihe mgbu na akuku ya nile - ee - mgbe ha na agba , ma n’oge na-adịghị anya ma ọ bụrụ na ịmalitere ịgba ọsọ na nkwonkwo ụkwụ ma ọ bụ akụkụ ụkwụ nke ụkwụ, ụfụ gị belatara. Footkwụ ga-agbadata n'ihu gị ma ọ bụrụ na ị kụrụ ikiri ụkwụ mbụ, nke a na-ahụkarị ma na-ewu ewu. - Ziri ezi.
wụkwasị anyịnya igwe
Lee ihe ọ na-eme, ọ na-eziga ike, site na ụkwụ ya na hip, nke ahụ na-emeghachi omume, ị na-akpọ ya. - N'aka nri, enweghi onye na-ahụ ihe na-eme ihe, ma ọ bụrụ na ị buru ụzọ kutuo ikiri ụkwụ ahụ, ọ na-aga n'ihu - - Aka nri - site na ọkpụkpụ, na nkwonkwo, mana mgbe ị rutere n'ụkwụ gị - ma ọ bụ ikekwe metatarsus gị - aka nri Achọrọ m iji ụkwụ ụkwụ naanị iji ihe atụ a, lee ohiri isi, ị nwere.- Ee, ọ dị ka onye na-awụ akpata oyi n'ahụ n'onwe ya.- Ọ bụ eziokwu, yabụ akwara ụkwụ gị na apata ụkwụ gị wee bụrụ nke na-ama jijiji.- Ee, n'ezie, a na-ekwukarị ndị mmadụ bidoro ibụ ndị ọgba ọsọ ụkwụ abụọ.
Vesmụ ehi gị na-afụ ụfụ na mbụ, n'ihi na ọ bụ ebe ahụ ka a na - eburu ike ahụ. - Ahụkwara m nke ahụ n'oge mgbanwe. - Ya mere, dị ka ngosipụta, anyị na - egosi ndị mmadụ otu ihe, nke ọzọ mgbe ị kụrụ ikpere gị, ụkwụ gị mbụ, ọ bụrụgodi na ọ metụtara ije.-Sure.-ị na-ata azụ ikpere.
Gịnị ma ọ bụrụ na ị kụrụ? Metatarsus ma ọ bụ ụkwụ ụkwụ ụkwụ, ị ga-enwe obere oghere na ikpere gị. Ọ ga-eme dị ka a ujo absorber. - Ọ gbagọrọ agbagọ ntakịrị. - Ee, ahuekere kpudo obere ntakịrị.
Ahụekere a ga - anọchi anya cartilage - Gini na - eme Bob? - Ma ka anyị kwuo na ikpere kwụ ọtọ. (Ikpere cracks) Ya mere oge ọ bụla ị kụrụ - cartilage na-aga - ebe cartilage na-aga - na dọkịta na-awa ikpere na-amụmụ ọnụ ọchị - ee, ma ị na-eche banyere ya. Ọ naghị eme oge ọbụla.
Mana ọ bụrụ n ’iwere nzọụkwụ 10,000 n’ụbọchị ihe ha tụrụ aro ugbu a, ndị mmadụ na-anwa iwe ya karịa 10,000, ugboro 10,000, ike, ike, ike. Yabụ ihe ọ bụla ị nwere ike ime iji belata ike ga-enyere aka. Otu ihe ị ga - echebara ka ị na - aga ije bụ ime ka ije gị belata - O doro anya - ị nwere ike ịbawanye ogologo oge - Cadence. - cadence.
Kedu otu ọsọ ị na-aga, mana ị ga-ebelata ngagharị ahụ. Nke a apụtaghị na ị ga-eji nwayọ nwayọ, ọ pụtara na ị ga-eji nwayọ nwayọ gawa. A na-atụ aro nke a mgbe ị na-agba ọsọ.
Right ga - eji ọsọ dị mkpirikpi na - agba ọsọ. - Ị maara ihe m chere? - Fọrọ nke nta ka a manye ya n'ikiri ụkwụ. - Ọ bụrụ n ’ị na-ehu n’ihu ntakịrị ọsọ ọsọ ma ị na-, ị ga - eje ije ọsịsọ mgbe ị hulatara. - Ma ọ bụ obere mkpọda n’ihi --- ihe. - Ọ bụrụ na ị dabere n’ihu nke ukwuu, ọ bụ ọnọdụ na nsogbu ahụ kwa, yabụ nke a bụ ụzọ aghụghọ - Ugbu a ihe ikpeazụ m chọrọ oh, ọkpọkọ ahụ na-aga. - Oh, ee - Achọrọ m ikwu banyere nke a, nke a bụ obere ihe siri ike maka ọtụtụ ndị mmadụ ịghọta, nke ahụ bụ ime ka mmejọ gị dị, - - N’ihi na ihe ndị ị na-eme bụ ibu akwara ma ha chọrọ ntakịrị ike site na ụkwụ gị. - Ziri ezi.
Yabụ, ha na-ekwu okwu ọzọ gbasara mgbe ị ga - eme mkpumkpu dị mkpumkpu, mana ị chọkarịrị ịkwatu ma chee na ị na - arụ ọrụ. Yabụ ị nwere ike ịga otu a. Can nwere ike, (ịchị ọchị)) chee etu akwara gị ji maa jijiji. - Yabụ mgbe ụfọdụ ị na-agagharị n’agbata otu ahụ? - Ee, ha maara, m nọ na ndepụta ugbu a, echere m. - Ha na ekwu. - Ee, ha na ekwu.
Nke a bụ ihe ọgbaghara, ọ dị nfe dị nkenke karịa iji belata usoro a iji jide n'aka na ị gafere ihu ụkwụ ma ọ bụ metatarsus. - Chọpụta. - Ma ị chọrọ ikwu maka Brad dentures ụzọ ịga. - Agbalịrị m ime ihe Bob kwuru.
Enwere m ike ịga ije. Aghọrọ m onye na-agba ọsọ ụkwụ ma m gbalịrị ije, anaghị m agbagharị otu ahụ, mana nke ahụ bụụrụ m ihe ịma aka. - Ọ bụ.- Ma ọ bụrụ na ị nwere oge siri ike, ma ọ bụrụ na ị nweta ụzọ insoles, ụfọdụ akpụkpọ ụkwụ ndị ọzọ, ị nwere ike ịzụta akpụkpọ ụkwụ nwere ọtụtụ ndị ọzọ ka ị na-aga ije, akpụkpọ ụkwụ ndị ahụ dị nnọọ njọ, ọ bụrụ na ịnweghị enweghị ihe ọ bụla ị nwere ike ịzụta n'ezie ntinye, ma ha enweghị njiko, iji kwuo okwu banyere isi - ha abụghị nkwado nkwado. - Ziri ezi.
Ihe mgbaru ọsọ bụ isi bụ naanị ịkwanye ụkwụ gị. M na ndị mmadụ na-arụ ọrụ na ihe. - Eeh. - Nke a bụ nhọrọ dị mma maka ha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha ga-eyi akwa akpụkpọ ụkwụ, ha bụ naanị - - Aka nri, nke na-adịghị agbanwe agbanwe - Kpọmkwem, nke ahụ nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ - Ọtụtụ mgbe, ị ga - ewepụ ụzọ inso - ị nwere ikike .- Ma dochie ha na ndị a, ndị a ga-ebipụ iji dabara akpụkpọ ụkwụ gị, na-abụkarị m wepụ ochie ahụ ma tinye ya n'elu --- maka ụkpụrụ. - Chọpụta ya. Ee maka ihe atụ.- Ma ọ bụrụ na ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ejiji na ịnweghị ebe a ga-eme ya, ị ga-abụrịrị ihe okike, ị nwere ike ime ya, ihe ị kwesịrị ime bụ naanị ịkpụ. fo nwere ike ime ya.- Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị belata mmetụta ị ga-eji lekọta ọnọdụ anya n'ihi na m na-ahụ ka ndị mmadụ na-eje ije na-etu ọnụ na m na-ahụ ka ọ na-aga ma ha na-aga ma ọ bụrụ ị ga-aga dịka nke ahụ ị ga-enweta ntakịrị ihe ahụ .- Chụọ.- Ma mara, ndị mmadụ na-ekwu maka na ha na-enwe isi ọwụwa mgbe ọ bụla ha na-aga n'ihi na ha na-aga otu a, ha na-etinye ya ebe ahụ spain.- Ee. - Na oyi akwa suboccipital.- M na-akpọ ya gooseneck. - The gooseneck, ee.- Na ọzọ m na-ahụ ya mgbagwoju anya mgbe ọ sịrị na ị dabere n'ihu. - Ee, anyị achọghị ka ị na-ele anya n'ihu dị ka stoop.- (mumbles)) Ọ bụ naanị obere ihe.- Mee ka ahụ gị guzozie, ezigbo ebe Brad.- You na-eche maka gị --- ịdapụ n'ihu ọnwụ. - Ee, mana ị chọghị. (ọchị) - Aka nri, mana ị naghị - Naanị na nke a, naanị ihe ngosi na ntụziaka a - yabụ kedu ihe ị ga - eme mgbe ị na - aga, oge ọ bụla na mgbe ahụ, achọrọ m ka ị tinye ụfọdụ ntụpọ gị agba. - Oh, ee. - Ya mere, ị ga-aga n’ihu ma nye ncheta, nke a bụ ebe ịchọrọ isi gị, ịchọrọ ntị gị n’elu ubu gị. - Nri. - N’ihe ị nwere ike ime nke ahụ, ọ ga - aka mma - Ma ị nwere ike ime nke ahụ n’enweghị ndị agbata obi na - ekwu okwu - Aka nri, dị akọ - Ikwesighi ime ha ruo mgbe ebighi ebi, naanị mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ n’ime ha bụ ezigbo ncheta. Gladys Kravitz nwere ike na-ele anya na windo ebe ahụ, ọ ga-ahụ gị ozugbo ị mere, mana ị maara - onye? - Ọ na - ekwu maka ihe niile.
O si 'Bewitched', o bu onye agbata obi ya - Ooh, 'Bewitched' - Gladys Kravitz nri? - Ugbu a ị ga - ewepu ụlọ ebe a na - edebe akwụkwọ akụkọ - Ọ dị mma, na - esote, otu ndị ahụ gbadara azụ ahụ na ubu mechie ma gaa n’ihu. Yabụ ihe ị ga - eme bụ ijide aka gị n’azụ azụ gị ma gbatịa. You nwere ike ime nke a mgbe ị na-aga ma ọ bụ otu ihe ahụ.
Aga m eme ya oge niile mgbe ị na-aga, ọ ga-adị mma, ọ bụghị ya? Ma ọ bụrụ na ịmee ma jegharịa, ị nwere ike ịga ije dịka ị na - esetị - ejiri m n'aka na ndị agbata obi ejirila ihe ọ bụla ị nwere ike iche. (Bob na-achị ọchị) - Ee e, nke ahụ bụ eziokwu, na ị gaghị eje ije otu ahụ ogologo oge.- Mba, jiri naanị nzọụkwụ.- Ee.- Ma ọzọ ọ na-eweghachi gị azụ, ọ na-etinye gị n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị - Ọ bụ eziokwu. - Ma ọ na-adị mma.- Ee, ị ga-enwe obere mgbatị ihu, ị maara na ọ bụ ihe na - aga n’ihu, ị ga - eji ya kute ume karịa. - M na - eme nke a.
Kwa ụtụtụ tupu m gbaa ọsọ, m na-agbada ugwu.- Ee .- Na m na-agbatịkwa nke ahụ naanị n'ihi na ọ bụ oge dị mma iji gbatịa ma ọ na-amasị m ịfụ ọkụ ntakịrị ma ọ bụghị naanị ịgbada ọsọ ahụ, ọ na-amasị m ịga ije. - N'ala mgbe ị ruru ala ugwu? - Ee. - Ma ọzọ? (ọchị) - mba, mba, mgbe ahụ m ga - agba ọsọ - Oh, ahụrụ m - Ọ dị mma, na - esote, ọ na - esiri ụfọdụ ndị ike ịghọta, ma ị nwere obere ibu na spain gị mgbe ị na - aga ngwa ngwa mgbe ị na - na-ntugheriukwu.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere mgbu azụ, gbalịa mụbaa ọsọ ahụ ntakịrị. Enwere m ọrụ a maka ụfọdụ ndị ọrịa ma ọ bụ mgbe niile ka ha bụ, ị nwere ike ịhụ ya n'anya ha dịka, 'Nke a na-arụ ọrụ?' - Ọfọn, echere m na ị ga-enweta nkwụsị elu ahụ, na-aga n'ihu, echiche niile na nke a Akwụkwọ na-agba ọsọ, echere m na - N'ezie. - O yiri ihe yiri ya. - Eeh, ihe ọ bụla ọ na - arụ maka ọtụtụ mmadụ, yabụ nwaa - Yup - anyị ga - atụ aro ma ọ bụrụ na ị ga - emeli ya, o doro anya na ọtụtụ ndị enweghị ike ịme ya. ma ọ na-enyere aka mgbe ị nwere ike ịga ije na okike.
Echere m, ọ bụ n'ezie
Brad zoro aka na nyocha nke gosiri na nrụgide nrụgide gị na-agbada ma e jiri ya tụnyere ịgagharị n'obodo ahụ -Nri. - Obodo obodo. O doro anya na ọ ka mma.
Enwere obere brooding. Dị ka a ga - asị na ị nwere echiche na - agafe isi gị - ugboro ugboro.- Ọdịdị dị ka ọ na - enyere aka idozi nke ahụ. - Ọ dị mma, ị nwere ike iche na ị nwere okporo ụzọ, ị nwere oke ọkụ nke ụgbọ ala, megide nnụnụ na-abụ abụ ma na-ekiri ifufe, ahịhịa na-efegharị ifufe. - Nri, ikwesighi iche echiche banyere ihe ọ bụla ọzọ ị na-eche.
Ọ dị mma, achọrọ m ịtụba ya ebe ahụ, echere m na m ga-ahụ Steve Jobs a na-atọ ụtọ, nwoke ahụ malitere Apple. O meela nzukọ ije, gaa na ị na-ekwu okwu otua wee nwee nzukọ. Ya mere, echere m na a na-atụ m atụ - mmadụ ole nọ n'ọgbakọ? - Ee, amaghị m, nke ahụ bụ ezigbo ajụjụ, echere m na ọ masịrị nzukọ otu na otu ọtụtụ. --Nri - Naanị jee ije, ị ga - ahụ na ihe nkiri dị ka soro m wee gaa ma ha na-ekwu maka ihe dị mkpa - oh, dị ka ụfọdụ n'ime ihe nkiri vidio ndị ahụ - ee - ị ga - aga ije - ọ bụrụ na ị ga - ije ije agaghi-alaghachi. (ọchị) Ichetara cannoli? (ọchị) Echetara m na maka 'Nna Chukwu' - Ọ ga - aka mma ka anyị kwụsị Bob - Ọ dị mma, cheta Brad na m nwere ike idozi ihe ọ bụla - Ewezuga? - Obi tiwara etiwa - Mana anyị na - arụ ọrụ na ya - Nke ahụ na - arụ ọrụ, nke na - enyere aka.
Na-eje ije? - Cardio na enyere aka. - Ọfọn nke a bụ nzọụkwụ dị mma ma enweghị ntaramahụhụ ezubere. - Oh, m na-aga n’ụzọ ziri ezi.
Kedu ngwa ị ga-anọ iji gbagoo ugwu?
Mgbena-agbago ugwu, jiri D1, D2, ma obu D3Kwadobeiji nọgide na-enwe RPM ndị dị elu ma nyekwuo ụgbọ gị ike na ọsọ ọsọ. Mara: Ọtụtụ ụgbọ ala akpaka nwere opekata mpe D1 na D2gia, ebe ụfọdụ ụdị nwekwara D3gia.Jul 26 2016 g.
** can nwere ike gbanyụọ ndepụta okwu na ntọala ** Ndewo, Abụ m Chris. Okporo ụzọ a dị warara, warara na ikuku. Ngwongwo 1 kachasị mma ebe a ka ọ na-enye nwayọ nwayọ mana ike dị elu maka ugwu a.
Aghaghị m iji nwayọ nyara ụgbọala ma dị nkwadobe maka ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ dịka ndị ji ụkwụ aga n'okporo ụzọ yana ụgbọala ndị na-abịa. N'ezie, enwere ọtụtụ ụzọ mepere emepe na sara mbara karị na-aga ugwu iji mee ka ngwa ngwa gbanwee. N’isiokwu a anyị ga-agbago ma gbadata n’ugwu nta ma hụ ihe gia ịhọrọ na mgbe ịgbanwee.
Ọ bụrụ na ị na-arị ugwu ma na-agbanwe ngwa ngwa tupu ịmalite ngwa ngwa, nke a ga-eme. Ana m agagharị na nke 2. Gbọ ala ahụ nwere nsogbu ma nwekwa ike ịkwụsị.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m gbanwee nke atọ? Ugbu a ọ nwere nsogbu n'ezie, ọ kaara m mma ịlaghachi na 2 ebe. Ọ na-adịtụ mma. M gbanwere na 1st ọ na-adị ka m nwere ọtụtụ ikike iji mee ngwa ngwa.
Kedu oge bụ oge kachasị mma iji gbanwee gia? Ngwongwo ndị dị ala kachasị mma mgbe ị na-anya elu ugwu dị elu. Tupu ịkwalite ọrụ, gbaa mbọ hụ na ị ga-ebu ụzọ mee nke ọma, ntakịrị ihe karịa ka ị ga-eme n'okporo ụzọ dị larịị. Nyekwuo ụgbọ ala ahụ, bulie ike ma ọ bụ ihe ọ bụla ka ị na-agafe ngbanwe ụgbọ ahụ, ụgbọ ala ahụ ga-akwụsị ngwa ngwa. Nke a pụtara na ị gaghịzi achọ ngwa ngwa ahụ dị elu karịa na ị ga-agbada ịgbada ma ọ bụ kụrụ ụgbọ ala zere .
Anọ m na ngwa 2 ugbu a. Kpachara anya maka ụgbọ ala a na-abịa dị n'okpuru akara. Ugbu a, enwere m ike ịgbatị ọsọ ma were aka nke atọ n'aka ekpe ma ugwu ahụ na-adị elu.
Ike ndọda ga-adọm nwayọ nwayọ, enweghị breeki achọrọ. Maka njikwa ka mma, tinye akụrụngwa 2nd tupu ịghasa. O siri ike ịhụ n'ihu, ana m edebe ọsọ a na gia 2nd.
Enweghị ike ịhụ n’elu ugwu. Ọ dị mma, leetụkwuo anya, mana otu ụzọ ka dị warara. Ma mee ya n’elu wee mee ya n’elu ugwu ahụ Ọ dị mma, oge eruola ka ị gbadata n’ugwu ahụ ugbu a, ma ọ bụrụ na ị na-agbada ugwu gbagọrọ agbagọ, ịkwọ ụgbọala n’ụgbọ ala ga-enyere aka mee ka ụgbọ ala ahụ nwayọ nwayọ karịa ka ọ ga-eme ọ bụrụ na ị nọ n'ọkwa dị elu.
Nke a na-enwekwu mmetụta nke a na-akpọ engine braking. Lee nkọwa dị n'okpuru ebe a maka ozi ndị ọzọ na nke a, mana abamuru nke ịda igwe bụ na ị nwere njikwa ka mma yana ịghara ịwe breeki ka ukwuu, nke na-ebelata ohere nke breeki na-akwụsị ma ọ bụ na-eme ka ihe ọkụkụ ghara ịdị ọkụ. Cheta na steepụ ugwu ahụ, ntakịrị ihe ị ga-achọ.
M gafere ihe ịrịba ama nke na-adọ m aka ná ntị banyere otu mkpọda dị elu. M na-akwadebe na 2nd gia na breeki ejighị ya kpọrọ. Ọ bụrụ na m bụ nke atọ, ọ bụrụ na m bụ nke atọ, m ga-agbaji mgba karịa ụgbọ ala ga-anwa ịgba ọsọ.
Ọbụghị naanị ugwu ugwu a, mana ụzọ ahụ dị warara na ụgbọala ndị na-abịa. Ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma ịga ngwa ngwa. Zọ ahụ ga-esiwanye ntakịrị ma enwere m ohere dị ukwuu iji gosi gị ihe na - eme mgbe m gbagara na 3rd ebe naanị ka ị nwee ike ịhụ etu ụgbọ ala si agba ọsọ ọsọ.
Agaghị m eji breeki ụkwụ ma ọ bụ ome osooso. Gbọ ala na-agba n'ike n'ike n'ike. Breeki na laghachi azụ 2.
Ugbu a, nke ahụ bụ njedebe nke isiokwu anyị. Daalụ maka ikiri. Enwere m olileanya na ị hụrụ na ọ bara uru, ọ bụrụ na ọ bụrụ na biko biko denye aha na isiokwu anyị kachasị ọhụrụ.
Nnukwu ekele gị na onye ọ bụla zụtara anyị kọfị mebere, ọ na-enwe ekele dị ukwuu. Nọrọ n'okporo ụzọ dị ka ọ na-adị na mbụ!
Kedu ihe bụ ịgba ugwu dị larịị?
Y’oburu n’inwe mmasiịgba ígwèugwu (ma ọ bụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnọghị) ị ga-anụla ka ndị mmadụ na-ezo aka ịrị elu gradient (ma ọ bụ nkpoda) dị ka pasent. Ekwuru na uzo di ala nwere gradient nke 0%, ma uzo ozo nke gradient ka elu (dika 10%) busteepụkarịa ụzọ nwere grajentị dị ala (dịka 5%).05.22.2013
Kedu ihe gradient dị larịị maka ịgba ígwè?
Gradient maka ịgba ígwèekwesighi igafe 6%, obu ezie na akuku di nkenke nwere ike inweta 10%. Ruo ogologogradientskwesiri iwelata 2-3% (mana lekwa mkparịta ụka ahụ ọzọ). Ad 2. Na-atụ aro S = 0.075, max S< 0.200.
Ọ ka mma ịgba ọsọ ọsọ ka ọ bụ n'ihe masịrị gị?
Gụnyere ugwu nwere ike inwe nnukwu uru na-agba ume, ọ na-ekwu.Na-agba ọsọna iheuchena-etinye akụkụ dị iche iche nke akwara gị, dị ka mkpịsị ụkwụ gị dị n'elu, ma na-elekwasị anya na ị na-eme karịa ihe mbadambagbaa ọsọ. Ma ebe ọ bụna-agba ọsọugwu ugwu na-adịwanye njọ, ọnụọgụ obi gị na-abawanyeỌsọ ọsọ.Jul 29. 2014
Ugwu a na-arị ugwu dị mma maka ụkọ ọnwụ?
Ije ije n'ihe ga-enyere gị akaidapound karịa na ala dị larịị. Womenmụ nwanyị atọ nọ n'okpuru nke ọ bụla na-apụ ma ọ dịkarịa ala pound 35, ọtụtụ n'ime ya n'etiti, na-eji otu n'ime ngwa agha nzuzo ndị a: plyometrics,ugwu nta, ma ọ bụ etiti oge.Ọgọst 29 2008
Ì kwesịrị ịgafe ugwu mgbe ị na-arị ugwu?
Downshiftngwa ngwa ma ọ bụrụgị'reịrị ugwuiheugwuna-amalite ida ọsọ. Agbanyeghị,gịAga m mkpadownshiftngwa ngwa ma ọ bụrụgịida ọsọ ma ọ bụ ọ bụrụ na injin gị na-ebigbọ ma na-acha ọcha, nke pụtara na ọ na-agba mgba. Iji gbochie stalling ma ọ bụ ekpo oke ọkụ, ịda mba ipigide, ịgbanwee gaa na nke abụọ gia, mgbe ahụ mee ngwangwa dị kagịhapụ ipigide.
Ọ ka mma ịkwọ ụgbọala n'ụgbọ elu dị elu?
Na-akwọ ụgbọalajiri nwayọọ na elugiaga-emekwa ka oriri mmanụ bawanye. Jiri nke kachasi elugiamgbe ọ dị mma ịme ya, ma nọrọla na alaKwadoben'ihi na ogologo. Nke a ga - enye aka n’ichekwa mmanụ ọkụ. Iji nrughari akara mgbeịnya ụgbọ alaelu ugwu ga-eme ka ụgbọ ala gị gbapụ ọsọ, na-ebutenke ka eluoriri mmanụ.
Ebee ka ugwu dị elu dị na West Cambridgeshire?
Imirikiti ugwu ndị a dị na West Cambridgeshire. N'ụzọ dị ịtụnanya, enweghị ịrị elu (nke m chọtara) na-eme ọkwa na Newmarket Ridge. 1. ’shụnanya nke ugwu Nice obere ọrịrị na-ahapụ Castor, na nso Peterborough. 2. Osimiri Morborne na-agbago ruo na Morbonne Transmitter, ngalaba nke dị larịị gbadara 13.6% karịa 110m.
Kedu ụzọ kachasị mma iji rịgoro ugwu?
Gbalịa iji obere gia na otu ugwu dị larịị. Ozugbo i nwekwuru obi ike na ị na-arị ugwu na ịnyịnya ígwè, mụta usoro maka ịrị ugwu n'ụzọ akụ na ụba. Usoro a choro ka ị nọrọ ọdụ ma jiri obere ihe, ma adaberekwala iguzo ọtọ ọtụtụ oge:
Kedu nke bụ ugwu dị elu na St Ives cc?
Grajentị ahụ ji nwayọ malite nwayọ wee rịa elu na gradient 9% kwụ ọtọ maka ịrị elu 320m na ​​ụlọ mmanya ahụ. 4. Ugwu Belton Obere obere ma zuru oke guzobere na-aga elu na-aga, ọ na-arị otu ugwu dị ka Staunch Hill n'ebe ugwu ma na-etolite akụkụ mbụ nke St Ives CC Hill ịrị. 5. Woolley Hill na-agbago otu ugwu dị ka Staunch Hill na Belton's Hill.